Naya Bikalpa | कुर्सी बचाउनका लागि अपनाइने यस्ता खालका हथखण्डाहरु हाम्रा लागि स्वीकार्य हुने छैन - Naya Bikalpa कुर्सी बचाउनका लागि अपनाइने यस्ता खालका हथखण्डाहरु हाम्रा लागि स्वीकार्य हुने छैन - Naya Bikalpa
कुर्सी बचाउनका लागि अपनाइने यस्ता खालका हथखण्डाहरु हाम्रा लागि स्वीकार्य हुने छैन
प्रकाशित मिती: २०७७ असार २२, १३: ३२: ५३
चालु नेपाली काँग्रेसको बैठक स्थगित गर्नुको कारण प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नलाई हो त ?
नेपाली कांग्रेसले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर हट्ने भन्ने व्यवहारिक विषय होइन । त्यसैले संसद्मा स्पष्ट भन्दा पनि अधिक मत नेकपाको रहेकाले उसैबाट निर्णय नभई केपी शर्मा ओलीको सरकार रहने वा नरहने भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैन ।
त्यसैले नेकपाभित्रकै असहज परिस्थितिले र प्रधानमन्त्रीकै गलत क्रियाकलापले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने नैतिकता गुमाइसक्नुभएको छ । हामीले यो कुरा संसद्मा ६ महिना अघिदेखि भनिरहेका छौं । त्यो कुरा अहिले आएर नेकपालाई पनि बोध भयो । उहाँहरुले त्यसको महसुस गर्नुभयो र राजीनामा माग्न थाल्नुभयो । यसले अब नेकपा ठीक बाटोमा हिड्न थाल्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा सत्तारुढ दलकै नेताले मागिसके नेपाली कांग्रेस राजीनामाको पक्षमा कि विपक्षमा ?
नेपाली कांग्रेस पहिले जहाँ थियो, अहिले पनि त्यही छ । संसद्मा प्रतिपक्ष दल हो । नेपाली जनताको बीचमा गएको निर्वाचनले लोकप्रिय मतको आधारमा ठूलो पार्टी हो ।
यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्वच्छाचारिताको विरुद्धमा जसरी संसदमा कुरा उठाइरहेको छ निरन्तर कायमै छ । अहिले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर बसेको अवस्था भएको हुँदा हामीलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेर किन चर्चामा लेराई दिनु र ?
त्यसोभए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर नेकपाका नेताहरुले सही निर्णय गरेका हुन् ?
उहाँहरुले एकदमै सही निर्णय गर्नुभएको छ । नेपाली जनता यत्रो कोरोनाको कहरमा जकडिएको बेला भ्रष्टाचार, अनियमितता, लापरवाही, हत्या, हिंसा, गैरजिम्मेवारीपनबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
नेकपालाई पनि लागेके हुनुपर्छ । त्यसैले त नेकपाका जिम्मेवार नेताहरुले प्रश्न उठाई रहनु भएको छ । हामीले पनि यसको समाधान नेकपाभित्रैबाट हुनुपर्छ भनेर भनिराखेका थियौं । त्यो बाटो प्रारम्भ भएकोले अब नेकपा ठीक अगाडि बढ्यो भन्ने लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले यतिबेला मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
संविधानले संसद्मा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको माग गरेको छ । त्यसैले मध्यावधीमा जाने भनेको सर्वसत्तावादी हठ र व्यक्तिवादी चरित्र हो । नेकपाभित्रै विकल्पहरु छन् र उहाँले अझ स्पष्ट सत्तामा र पार्टीको नेतृत्वमा आधा–आधा काम गर्ने भनेर सम्झौता गरेर बनेको सरकारमा आधा समय बितिसकेपछि अर्को साझेदार शक्तिले म पनि भोग गर्न पाउनुप¥यो भन्दा उहाँ आफैले प्रशस्तै गल्ती गरेर प्रधानमन्त्री भइरहने र नैतिकता गुमाइसक्दा पनि छोड्ने कुरा नगरेर ‘मैले खेल्न पाउँदिन भने म यो ग्राउन्डनै भत्काउँछु’ भन्नुहुन्छ भने त्यो गैरजिम्मेवारीपन, अराजनीतिकपन, अनैतिकपन र वेइमानी हो । त्यसैले त्यस्तो गल्तिको बाटो जानु हुन्छ भन्ने लाग्दैन् ।
प्रधानमन्त्रीले फेरि दल विभाजनको अध्यादेश लेराएर राष्ट्रपति समक्ष जानुभएमा के हुन्छ ?
दल सम्बन्धी ऐन त हामीले योभन्दा अगाडि नै अस्वीकार गरेकाले फिर्ता भएको हो । त्यो नेकपाका कारणभन्दा पनि हाम्रा कारणले चाहीं फिर्ता भएको हो । देशमा जब दल टुक्र्याउने, मुलुक राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने र भ्रष्टाचार मौलाउने किसिमको प्रवृत्ति र क्रियाकलापहरु अगाडि बढ्छ । हामी त्यसको सधैं विपक्षमा रहने छौ । प्रधानमन्त्रीले नितान्त आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि अपनाइने यस्ता खालका हथखण्डाहरु हाम्रा लागि स्वीकार्य हुने छैन ।
प्रधानमन्त्रीले नेकपा फुटाएर कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउछु भन्नुभयो भने तपाईं कता ?
कोसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने कुरा उहाँकै पोल्टामा रह्यो । अहिले नेपाली कांग्रेस के गर्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले नै निर्णय गर्ने भएकाले हामीले अहिले सत्ता या सिंहदरबारतर्प छड्के आँखाले पनि हेरेका छैनौं । यतिबेला हामी नेपाली जनताको दुःख, पीडा र समीक्षामा केन्द्रित छौं । त्यसकारण जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएको पार्टीबाटै सरकार बन्नुपर्छ । त्यो सरकार बन्न नदिनका लागि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न किसिमका अध्यादेश, हतखण्डा र क्रियाकलापहरु अपनाउनु गलत काम हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्मदिनमा नेपाली काँग्रेस पार्टीले उहाँलाई कसरी सम्झ्यो ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो शिखर पुरुष, महान राजनीतिज्ञ, नेपाली जनआन्दोलनका नेतृत्वकर्ता, नेपाली कांग्रेसका अभिभावको जन्म दिनको दिन हामी शान्तिवाटिकामा रक्तदान कार्यक्रम गरेका छौं । त्यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रहनुभयो । त्यसको आयोजना नेविसंघले गरेको थियो । सबै नेताहरु सहभागी भएर सभापतिकै प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रमभएको हुँदा सिंगो पार्टीले उहाँले सम्मानपूर्वक आदर गरेको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिइरहँदा नेपाली कांग्रेस अब एक भएर अगाडि बढ्छ ? अथवा गुटकै राजनीतिक रमाई रहन्छ ?
नेपाली कांग्रेस पार्टीमा अग्रज नेताहरुको ठूलो लाइन छ । स्वर्गीय नेता, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला । यी महान् नेताहरुकै पथमा अगाडि बढेर पार्टीभित्र आएका विचलन, कमीमजोरीलाई पनि ंउहाँहरुलाई सम्झेर एक ठाउँमा उभिएर मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुको त्याग र तपस्याले नै मुलुकमा प्रजातन्त्र पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यसलाई हामीले दह्रो खुट्टा टेकेर बचाई राख्नु पर्दछ । त्यसैले त्यही स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनमै हुनेभयो होइन ?
मुलुकको विद्यमान परिस्थितिमा सुधार आएन भने त फागुनमै हुन कठिता आउन सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालको संविधान र पार्टीको विधानलाई हेरेर महाधिवेशन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै भवितव्य प¥यो भने बेग्लै हो नत्र फागुन ७ देखि १० गतेभित्रै महाधिवेशन हुन्छ ।
२०७७ असार २२, १३: ३२: ५३